Kadib qabsashada MATABAAN, Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyey… | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Kadib qabsashada MATABAAN, Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyey…
Kadib qabsashada MATABAAN, Al-Shabaab oo qaraxyo ku burburiyey…
Dhuusamareeb (Dalkaan.com) – Kooxda Al-Shabaab ayaa saacado kooban si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta degmada Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya, kadib markii ay faarujiyeen ciidamadii ku sugnaa degmadaas.
Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa kadib markii ay gudaha u galeen degmada waxay qaraxyo ku burburiyeen saldhiga booliska degmada Matabaan, sida ay soo werinayaan dad deegaanka ah.
Sidoo kale xoogaga Al-Shabaab ayaa waxay gudaha degmada ka sameeyen dhaq-dhaqaaqyo lagu baadi-goobayo shaqsiyaad xiriir la leh maamulkii degmada.
Wararka ayaa intaas kusii daraya in dagaal-yahanaada kooxda Al-Shabaab ay iskaga baxeen degmada, kadib markii ay gacanta ku hayeen saacado kooban.
Ka bixista Al-Shabaab ayaa imaneysa xilli ay ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda ay u ruqaansanayeen dhanka degmadaas, ka horna ay sii faarujiyeen dagaal-yahanadii maanta la wareegay.
Xaaladda ayaa aad u kacsan waxaana dadka deegaanka soo wajahday cabsi xoogan, halka kuwa qaarna ay maanta isaga baxeen degmada, kadib cabsi xoogan oo soo wajahday.
Matabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan, hase yeeshe maamul ahaan hoostagta Galmudug ayaa waxaa dhowr jeer isku kala bad-badalay ciidamada Galmudug iyo kuwa taabacsan hogaanka Al-Sunna, oo ayadu kal hore dagaal la gashay maamulka.
Si kastaba, illaa hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay madaxda maamulka Galmudug iyo laamaha amaanka maamulka oo ku aadan xaalada Matabaan, oo goordhoweyd ay ka baxday kooxda Al-Shabaab, kadib saacado ay gacanta ku hayeen.
Sawirro: Muxuu Rooble kala hadlay hay’adaha amniga iyo taliska ciidanka AMISOM?
Muxuu ka dhashay dagaal siyaasadeedka ‘hantida guud’ ee Farmaajo iyo Rooble...
Xog Duulaanka Villa Somalia oo Fashilmay, Goaanada Adag ee Rooble, Cabsida...
Jose Mourinho oo ku sugan Nigeria Halkaasi oo Wadahadalo uu ka...
Ciidanka Jubaland oo xalay howlgal culus ka sameeyey magaalada KISMAAYO
Arsenal 1-2 Manchester City: Rodri oo guul weyn ku Hogaamiyay City
Qorshaha DENI ee haddii looga adkaado doorashada madaxweyne oo la shaaciyey